2019 Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ nkwụsị elu,Ụlọ na-egbochi ike,PVC Ụlọ Nche
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọnụ ụzọ nkwụsị elu > 2019 Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu
Ihe Nlereanya.: HF-W7532
Ubu oke: 100 sets/Month
Ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ụlọ gị gafere 6 * 6 mita, mana ị ga-achọ ọnụ ụzọ dị elu. Biko matakwuo banyere ụzọ mega dị elu
A na-eji ụgbọ mmiri eme ihe n'ụzọ pụrụ iche maka ọnụ ụzọ dị elu: ọnụ ụzọ atọ dị 380V; na otu oge 220 V ike: 0.55-1.5KW, IP55 50 HZ.
Ogologo mmeghe oghere mmechi Ọdịiche ọnụ ụzọ niile dị elu nwere ike ịghọta ngwugwu mmalite nke mmechi nke 0.7 na 1.2m / sec, nke kwesịrị ekwesị maka Ngwa ebe a na-ejikarị ụzọ logistical eme ihe mgbe ọ na-emezukwa ihe achọrọ maka ịbanye akara.
Ụdị njikwa 1. Ụdị bọtịnụ mgbapụta 2. Ụdị eriri 3. Ụgha nchịkwa 4. Ụdị gọọmenti geomagnetic 5. Ndagharị nke radar.
Qualityzọ ọnụahịa ụlọ ọrụ dị elu nwere nnukwu ụlọ ọrụ dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ nkwụsị elu Ụlọ na-egbochi ike PVC Ụlọ Nche Ọnụ ụzọ dị elu Ọnụ ụzọ Zipụ Dị Elu Ọnụ ụzọ nchebe dị elu Ọnụ ụzọ nnukwu ogige dị elu Ọnụ ụzọ siri ike dị elu